ह्याम्स हस्पिटलले ज्यान बचाइदियो भन्दै रणपालले यसरी व्यक्त गरे खुशी « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७७, २२ पुष बुधबार १६:२३ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । काठमाडौंको ह्याम्स हस्पिटलमा उपचार गराएका टेलरिङको काम गर्ने रामकुमार रणपाल नाम गरेका एकजना बिरामीले आफू कालको मुखबाट बाँचको भन्दै निकै खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले खर्च भएपनि खर्चसँग ज्यानको तुलना हुन नसक्ने अनुभव व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो ज्यान भन्दा ठूलो केही रहेनछ ।
स्वस्थ्य भएर आफ्नो घर बुटवल फर्कदै गर्दा जनस्वास्थ्य सरोकारसँग उनले गरेको खुशी जस्ताको त्यस्तै उनकै भाषामा प्रस्तुत गरेका छौं । आउनुस् के भने रणपालले ?
नमस्कार छ । मेरा सबै शुभचिन्तक र दर्शक, ग्राहक वर्गहरु, इष्टमित्र आफन्तहरु, मेरो सु—स्वास्थ्यको कामना गर्ने अधिराज्यभर बसेका हाम्रा व्यवसायीहरुलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । मेरो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने तपाईंहरुलाई म भन्न चाहन्छु—‘आज ह्याम्स हस्पिटलले कालको मुखमा पुगेको मलाई १० दिनभित्र जीवनदान दियो ।’
मेरो नाम रामकुमार रणपाल हो । म अहिले ६८ वर्षको भएँ । म बुटवलमा न्यु फेमस टेलरिङको प्रोपाइटर हुँ ।
म नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँ । हालसम्म मुलुकका ६८ जिल्लामा सिलाई व्यवसायी साथीहरु छरिएर बसेका छन् । हेर्नुस् मान्छेलाई रोग लाग्छ । रोग लाग्यो भनेर आत्तिन हुने रहेनछ । मान्छेले आफ्नो मनोवल बढाउनुपर्दोरहेछ । मनोबल बढाएपछि कालको मुखबाट निस्कन सकिने रहेछ भन्ने मलाई अहिले लागेको छ ।
शुरुमा मलाई सामान्य ज्वरो आयो । ५ दिनसम्म सिटामोलको सेवन गरेर घरमा आराम गरिरहेको थिएँ । पाँच दिनपछि मैले नुहाइदिएँ । नुहाएपछि मलाई अलिकति आफूलाई कमजोर महसुस भयो । त्यसपछि म हस्पिटल गएँ । मेरो कोभिड परीक्षण निगेटिभ थियो ।
डा. विष्णु भण्डारीले ३ दिनको दवाइ दिनुभयो । त्यो दवाइले मलाई छोएन । सास फूल्ने समस्या बढ्दै गयो । फेरि मैले डाक्टरलाई देखाएँ । डाक्टरले तपाईलाई यहाँ गरेर हुँदैन । मैले तपाईंलाई काठमाडौंको ह्याम्स हस्पिटलमा सिफारिस गरिदिएको छु । तुरुन्त जानुहोला भन्नुभयो । त्यसपछि उहाँको सिफारिस लिएर एक घण्टाभित्रै काठमाडौं प्रस्थान गरेँ ।
ह्याम्स हस्पिटलमा राति ८ बजे आइपुगेँ । यहाँ आइसकेपछि मलाई बाँच्छु होला भन्ने आश पलायो । त्यो बेला मेरो सास नली नै बन्द हुन थालिसकेको थियो । २ घण्टाभित्र तपाईं अस्पताल भर्ना नभएको भए तपाईंलाई हामी जोगाउन नसक्ने कुरा चिकित्सकले बताउनुभएको थियो ।
धन्य म समयमा आएछु । डाक्टरहरु उपचार गर्न सफल हुनुभयो ।
उपचारमा संलग्न डाक्टर राजु पंगेनी र डा. रक्षा पाण्डेलाई मेरो ज्यान जोगाइदिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरु मेरो गड फादर जस्तै बन्नुभएको छ । मेरो स्वास्थ्यका लागि रातदिन खट्ने अस्पतालका नर्स, प्राविधिक, मेडिकल अफिसर सबैले हरतरहको कोशिस गर्नुभयो । डाक्टर पंगेनी र डाक्टर पाण्डेजस्ता व्यक्तिले मेरो स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो र उपचारमा निकै मिहिनेतका साथ खटिनुभयो । यसप्रति मलाई गौरव लागेको छ ।
१० दिनमा म कालको मुखमा गएको मान्छे पनि बचेँ । कस्तो राम्रो हस्पिटलको व्यवस्थापन ! निकै आश्चर्य लाग्यो । यहाँ पैसा त खर्च हुने रहेछ । तर मर्नुपर्ने रहनेछ । ट्रिटमेन्ट अति राम्रो । अस्पतालका सबै कर्मचारीहरुको काम गर्ने शैलीदेखि म निकै प्रभावित भएँ । म त सर्वप्रथम अस्पताल सञ्चालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सबैलाई एक ठाउँमा राखेर काम गराउन सक्नु कति राम्रो कुरा हो ।
बिरामी भएकाहरु पैसा तिरेर पनि कालको मुखमा गएका छन् । तर ह्याम्स हस्पिटलमा आइसकेपछि मर्नुपर्ने रहेनछ भन्ने कुरा आज मलाई लागेको छ । त्यसैले ६८ जिल्लामा छरिएर रहेका हाम्रा व्यवसायी साथीहरुलाई कोभिड, श्वास प्रश्वाससम्बन्धि कुनै समस्या भएमा ह्याम्समा राम्रो उपचार हुनसक्ने रहेछ भन्ने मेरो अनुभव सुनाउन चाहन्छु ।